प्लाष्टिकको टनेल कसरी बनाउने ? | खुल्लापाना
खुल्ला पाना २०७७ माघ १९, सोमबार (१ साल अघि) ९० पटक पढिएको
नेपालमा सामान्यतया प्लास्टिक टनेल तथा बाँसको प्लास्टिक घर बढी प्रचलित छ । सामान्यतया ५ मिटर चौडाई र २० मिटर लम्बाईको प्लास्टिक घर राम्रो मानिन्छ । प्लास्टिक घरको निर्माण गर्दा भने बिज्ञहरुको सहयोग लिनु आवश्यक छ । प्लास्टिक घर मित्र सापेक्षित आद्रता ७० देखि ९० प्रतिशत र तापक्रम करिब २० डिग्री सेल्सियस हुनु बिरुवाको बृद्दि बिकासका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
प्लास्टिक घरभित्र खेति गरिने मुख्य तरकारीहरूः
प्लास्टिक घरभित्र सबै प्रकारका तरकारी बालीहरु लगाउन सकिन्छ । बिशेषत बेमौसममा बढी मूल्य जाने तरकारी बालीहरु प्लास्टिक घरमा लगाउने गरिन्छ । सामान्यता गोलभेडा, काक्रो, खुर्सानी, सिमि, भन्टा, सागपात, भिंडी, काउली, बन्दा, फर्सि, लौका, करेला तथा केराउ लगायतका तरकारीहरू प्लास्टिक घरमुनि लगाउने चलन बढ्दो छ ।
जग्गा तथा प्लास्टिक छनोट
सामान्यतया समुद्री सतहदेखि ५०० देखि १७०० मिटरको उचाई , प्रशस्त सूर्यको प्रकाश पर्ने तथा जोडले हावा नचल्ने क्षेत्र प्लास्टिक घर भित्र तरकारी खेति गर्न राम्रो मानिन्छ । भिरालो र बर्षामा भेल पस्ने तथा पानि जम्ने ठाउमा प्लास्टिक घर बनाउनु हुदैन ।
प्लास्टिक छनोट गर्दा भने उचित प्रकाश छिर्ने ९० देखि १२० जीएसएम सम्मको प्लास्टिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । धेरै बाक्लो प्लास्टिक प्रयोग गर्दा प्लास्टिक घरभित्र प्रकाश कम पर्ने हुन्छ जुन उपयुक्त मानिदैन ।
टनेलको फाईदा के हो ?
वर्षा को पानी रोक्न र हिउद मा चिसो बाट जोगाउन ।
बर्षात को बेला डडुवा रोग बाट बचाउन ।
मलखाद , बिषादी , भिटामिन को खपत राम्रो संग हुन्छ यानी नोक्सान भएर जाने सम्भावना कम हुन्छ ।
उत्पादन बृदि हुन्छ , गोलभेडा को हकमा प्रति वर्ग मिटर १२ देखि २० के जी अनि ६००० देखि १०,००० सम्म प्रति रोप्ने लिन सकिन्छ तर खुल्ला मा भने मात्र ३००० देखि ४०० के जी मात्र फलाउन सकिन्छ ।
बिरुवा मा रोग किराको संक्रमण नहुदा बिरुवा को आयु बढ्छ र उत्पादन समेत बढ्छ ।
प्लास्टिक टनेल कति उचाई सम्म बनाउन् सकिन्छ ?
८०० देखि २६०० मिटर उचाई भएको स्थान सम्म मा गर्न सकिन्छ तर १२०० मिटर देखि २००० मिटर राम्रो हुन्छ ।
टनेल कस्तो ठाउँमा निर्माण गर्ने ?
बारी वा खेत तर पानी नजम्ने वा पानी को निकाश सजिलै हुने ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।
भिरालो जमिन राम्रो हुन्छ तर ठिक्क को भिरालो छ भने एक पाखे प्लास्टिक घर बनाउदा राम्रो हुन्छ ।
दिन भरि घाम लाग्ने पारिलो स्थान , सिंचाई को राम्रो व्यवस्था भएको , सेपिलो ठाउँ राम्रो हुदैन , पानी जम्ने , भेल आउने जमिन उपयुक्त हुदैन ।
प्लास्टिक घर कति छेत्रफल को राम्रो हुन्छ ?
चौडाई ५ मिटर बढीमा ६ मिटर र लम्बाई २० मिटर बढीमा ३० मिटर
प्लास्टिक घर को उचाई ?
मध्ये पहाडी छेत्रको लागि (८०० देखि १६०० मिटर सम्म )
बिचको मुख्य खाबा को उचाई १० फिट, जमिन भित्र गाड्ने २ फिट , जमिन माथिको उचाई ८ फिट , छेउ को खाबा को उचाई ८ फिट भित्र गाड्ने २ फिट जमिन माथिको उचाई ६ फिट ।
एक पोल देखि अर्को पोल को दुरी २.५ मिटर ( ५ मिटर चौडाई भएमा ) , एक पोल देखि अर्को पोल को दुरी ३ मित्र येदि ६ मिटर चौडाई भएमा ।
घर को आकार ?
उच्च पहाड को लागि गुमोज आकार , मध्ये पहाडी को लागि दुइ पाखे गोठ जस्तो ।
बलोको आबस्यकता ?
एक प्लास्टिक घरमा तिन लहर पोल हुन्छन जसमा एक लहर र दुइ लहर बलेशी हुन्छन । अत ः प्रतेक पोलको लहर मा एक एक वटा बलोको आबस्यकता पर्छ्र प्रतेक पोल लाई बला संग राम्ररी बाध्नु पर्छ ।
छानो मा भाटा राख्दा के गर्ने ?
एउटा २० मिटर लम्बाई ५ मिटर चौडाई घरमा एक भाटा बाट अर्को भाटा को दुरी ४० से मि को फरक मा राख्दा ५० वटा भाटा को आबस्यकता पर्छ ।
५० वटा बनाउन को लागि ९ वटा बाँस को आबस्यकता पर्छ ।
बाँसको प्लास्टिक घर